sistemụ igwe ojii nke Regal 2014-2016 China Manufacturer
Home > Ngwaahịa > Buick Android Car Dvd > sistemụ igwe ojii nke Regal 2014-2016
Sistemụ igwe eji ekwu okwu Android 8.0 maka Regal 2014-2016
Android bụ sistemụ arụmọrụ na-enye ike ihe niile ị na-eme na sistemụ mgbasa ozi maka Regal. Usoro mepere emepe a na-enye gị ohere ịwụnye ọtụtụ ngwa kachasị amasị n'ime ebe nchekwa 32GB site na ikpo okwu dị ka Google Play. Gamesgba egwu egwuregwu ntanetị, vidiyo, egwu na-adịzi n'ụgbọ ala gị. Ntanetị nke onye na-akwọ ụgbọala tinyela ọtụtụ ngwa ọdịnala n’ebe a na-adịghị ahụ anya enwere ike ịnweta ngwa ngwa mgbe ị na-anya ụgbọala.
Egosiputara n’ime usoro mgbasa ozi a maka Regal bụ ikike WIFI na Bluetooth nke na-enye gị ohere ijikọ ngwaọrụ ma nweta ịntanetị site na 3G. O nwere igwefoto na -emeghari agbakwunyere, ga-agbanwe enyo ya na akpukpo ya n’ilegharịgharị na-eme nnukwu ngwaahịa maka nchekwa.
Sistemụ akụrụngwa Hilux android 8.0 sistemụ eji gps navigation Kpọtụrụ ugbu a
Hilux android 8.0 isi isi ya na gps sistem Kpọtụrụ ugbu a
sistemụ ụgbọ ala android 8.0 maka Hilux 2016 Kpọtụrụ ugbu a
Android 8.0 igodo ụgbọ ala nwere gps maka Elantra Kpọtụrụ ugbu a